Taariikhda My Butros » 12 Talooyin Si aad Salel Marka Dating Online
Last updated: Oct. 21 2020 | 4 min akhri
Shukaansi Online mararka qaarkood dareemi kara jiro aad niyad-jabo. Waxay keeni kartaa noo dareemaan gubay baxay, jahawareer iyo qadhaadh. Haddaba sidee baad u fogaado iyo halkii ay ka dhigi shukaansiga online khibradaada Breezy oo xiiso leh waxay noqon kartaa? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin aad u.
– Oggolow in aad doonaysid in aad la kulantid dad badan oo online in si fudud ma noqon doonto waxa aad raadinayso. Taasi way wanaagsan! Waa qayb ka mid ah heshiiska. Ha loo dhigo haddii tirooyinka gaaraan galay boqolaal ka (Ma dhahayo si aad cabsiiyo iyo gaari karin this sare haddii aad tirisaan kasta e-mail). Iyada oo shukaansi online waxaa ay aqbaar badan ka YIHIIN iyo dib u soo. Aqbal oo aad dhibin doonaa.
– Waxay leedahay nidaam ee wax ka qabashada e-mails iyo xiriirada. Tani waxay kaa caawin kartaa in aad looga hortago gubi baxay iyo dersaan. Waxaan u leedahay in a e-mail caadiga ah in aan u isticmaali lahayd ee la xiriiraya dadka taas oo kaliya aan wax yar la qabsan lahaa ku xiran shaqsiga I ayaa la xiriiraya isticmaalo. Waxaan ognahay in ay tani loo arko karo dheehanyahay, Dhab ahaantii ay ahayd oo kaliya hab wax ku ool ah si loo maareeyo nidaamka iyo sii joogo tamar sare. Ka dib markii aad soo qaatay saacado garaacaya ereyada ah e-mail kaamil ah oo kaliya in ay jawaab lahayn (mar kale), waxaad fahmi doontaa sababta aan arrintan soo jeedin. Waxaad sidoo kale yeelan karaan fayl kala duwan oo aad ka saaray dadka ku xiran tahay in aad xiisaynayso ama ma.
– Hayso bilowga e-mails gaaban. Waxaan Kuma doodayno in aanad dhibaato si aad u hesho in la ogaado dadka, kaliya in aad sii bilowga e-mails quruxsan gaaban inta aad iyaga baarista la. Haddii ka dib markii dhowr e-mails gaaban aad labadaba waa weli xiiso iyo xidhiidhka ka dibna waxaad tagi kartaa wax yar iyaga la qoto dheer. Tani waa waadixa ah ee looga hortago gubi bixi oo xamili haddii aad heli badan oo e-mails iyo xiisaha.
– Dhakhso ah u 'in qof' ama telefoonka. Waxa cad in sii ammaanka ku hay, oo waxaan ku dhiiri macaamiisha aan u helo taariikh nolosha dhabta ah si deg deg ah. Tani waa sababta dadka aad u kala duwan ee nolosha dhabta ah wuxuu noqon karaa mid ka sida ay online yihiin, iyo ma garan kartid doono haddii ay ku dhaxjiraan inuu taam noqon doono a idiin ilaa aad ku kulmi nolosha dhabta ah. Si taas loo gaaro ma saacadood Fariin iyo dib online, haddii kale waxaad halleeyay waqti badan ku dad laga yaabo in aanay noqon mid kugu haboon.
– Ha ka walwalin haddii aadan helin jawaabood in ay e-mails kuu soo diri. Haddii taasi kugu dhacdo adiga waan ogahay waa ay dareemi karaan xun iyo mar kale hana u qaadanayaan si shakhsi ah. Mararka qaarkood waxaan dhan maraan joogay qallalan halka aan ka heli WAXBA. No jawaabood in mid ka mid ah e-mails waxaan kuu soo diri, ma xiriirada iyo wixii la mid ah. Ha baqin hadii sidaan ay kugu dhacdo, Si kastaba ha ahaatee waxaa haboon in la qaato fiirin kale ujeedada waxa aad qoraal ku saabsan profile iyo sawirada aad posted. Dhawaaqa aad profile waa hubaal noqon saaxiibtinimo, iftiin iyo farxad wax. Haddii weli aad isagoo nasiib lahayn mar aad ka hubisay aad profile, waydii saaxiib aad ku kalsoon in ay eegaan kana war celin ku siiyaan qaar ka mid ah. Xitaa leeyihiin fiiri badan qaar ka mid ah farriimaha aad u dirayso soo baxay si loo hubiyo in ay akhriyaan OK.
– In xididka la mid ah haddii aad tahay qof dumar ah oo aad ku sugaya inay helaan farriimaha qaar ka mid ah oo aan waxba ku imaaneyso, mar kale ha ka werwerin. Akhri oo raac talaabo ee kor ku xusan. Sidoo kale la soco in tani ay tahay aagga keliya oo aan soo jeedinaynaa in haweenka noqon kartaa in ay tamar rag ah, loogu talagalay oo keliya tallaabadan billowga ah. Maxaan ula jeednaa tani ay tahay ka hor tago oo tallaabada kowaad adigoo la xiriiraya oo fariin dadka aad jeceshahay. Sites shukaansi Online noqon karaa mid aad 'buuq' oo aad heli kartid badiyay in iskushaandhaynta haddii aanad samayn hortiinna la garanayo ee aad. Isticmaal tamarta rag ah in ay la xiriirto dadka iyo aad u hesho nidaam aad meel, ka dibna hoos u daafaca midig galay aad tamarta dhedig mar isgaarsiinta ayaa bilaabay.
– Ha u qaadanayaan si shakhsi ah haddii ay baaba'aan. Waxaan oo dhan ayaa waxaa dhici. Waxa aad la kulmi qof online, aad sheekaynta iyaga la, waxa uu dhan si fiican u socda, Dhisida xunna, laga yaabaa in aad xitaa ka shaqeeya ilaa weydiisanaya taariikhda a, ka dibna si kadis 'POOF' way libdhaan daruur qiiq ah, marnaba la arki mar kale. Ma dhihi wax xun? Ma waxay ka dhiman? Well malaha ma. More badan tahay ay sidoo kale la hadalka dadka kale online, iyo qof kale helay in ay jiraan ugu horeeyay, ama laga yaabee in ay hore in ay weli si qarsoodi ah jaceylka dib tusay, oo ha idin lahaa baxsado nasiib. Ujeedadu waxay tahay in aad u badan tahay ma ogaan doonaa. Markaasaa waxaa taas wada dhacaya waqtiga oo dhan! Haddii aad waxan u garan waxa ay ka caawisaa qaadan Micida soo baxay waxaa ka mid ah. Waxaan mar walba oo talo haweenka macaamiisha ma si aad u hesho oo aad u shucuur ilaa aad dhab ahaantii la kulmay nolosha dhabta ah, iyo in xaqiiqda ilaa uu aad muujinaya inuu yahay si xun xiiso aad ee. Ilaa waqti in uu yahay mid ka kaliya fursad aad u out of badan. Ha u qaadan 'waayin ka' si shakhsi ah.
– Waxaa dhammaan Ula dhaqan xaddi yar oo milix. Shukaansi Online waa sida ay tahay. Oo haddii aad u aqbali karo waxa ay tahay waxaad yeelan doontaa waqti badan ka sahlan u leh. Waxa aad la kulmi doonaa qaar ka mid ah oddballs, waxaad la kulmi doontaa dad ka mid ah kuwo aad u aragto in ay yihiin xun, mudantihiin la kulmi doontaa dadka qaar aad jeceshahay iyo waxaa laga yaabaa inaad la kulmi doonaa qof ku yeelan karaan xiriir la leh iyo JECLAAN. Si kastaba ha ahaatee wax kasta oo kale waa, waxa ay noqon doontaa waayo-aragnimo ah. Waxaad bixi doona sida qofka, sababtoo ah waxaa ka mid ah oo aad ka heli in ay ku dhaqmaan, lalana xiriiro xubnaha jinsiga ka soo horjeeda. Sidaas Ma siinayo in, kaliya hubi inaad u qaadan la yaabtid ama cusbo, qososho la saaxiibo waxay ku saabsan oo ay leeyihiin qaar ka mid ah xiiso u leh jidka.
5 Sababaha Maxaad Taariikhaha Quraac First mawhibo
Inyar baa laga ogyahay Siyaabaha Hel Love ee Your Life